Siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan Afrika Iskama Dhego-tiri karto Somaliland | Baligubadlemedia.com
Siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan Afrika Iskama Dhego-tiri karto Somaliland
Khabiir Michael Rubin oo ah xeel-dheere Maraykan ah ayaa Dawladda Dalkiisa ku guubaabiyey inay wax la qabato Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku tilmaamay mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon Afrika isla markaana ay ka qabsoomeen doorashooyin lagu tartamay.
Wakaallada Wararka Somaliland (SOLNA) ayaa maanta soo xigatay warbixin dheer oo Michael Rubin kaga faallooday muhiimadda ay Somaliland u yeellan karto Maraykanka, taasi oo lagu daabacay Shabakadda American Enterprise Institute.
Michael Rubin wuxuu qormadiisa ciwaan uga dhigay: “Siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan Afrika Iskama Dhego-tiri karto Somaliland” waxaanu sheegay inay Somaliland si weyn uga duwan tahay Soomaaliya , isla markaana ay qabsoomeen doorashooyin lagu tartamay, dawladnimo shaqeynaysa.
Aqoonyahan Michael Rubin wuxuu tilmaamay inay la-dagaalanka Argagixisadda iyo dagaalka ka socda Yeman uu kor u qaadayo istaraatajiyadda iyo muhiimadda Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxa kaloo uu intaas ku daray in Somaliland ay Miisaaniyaddeeda saddex meeloodoow meel geliso dhinaca Ammaanka ay hubka fudud soo iibsadaan, si ay ilaaliyaan ammaanka xeebta Somaliland oo dhererkeedu yahay 460 Mayl, waxaanu xusay inay ka hortagaan hubka sida sharci darrada ah uga imanaya dalka Yeman, waxaanu isweydiiyey sababta Xafiiska Arrimaha Dibadda Maraykanku ay xafiis ugu yeelan weyday Somaliland.
Michael Rubin wuxuu sidoo kale ka hadlay tacab khasaarka Maraykanku ka joogo Soomaaliya oo uu dhaqaale badan iyo cuddud millatari la garab istaagay, waxaanu ku sifeeyey Dawladda Farmaajo mid maqaar-saar ah oo xukunkeedu aanu gaadhin masaafo aan fogeyn qasriga madaxtooyadda.
Waxa kale oo uu ku dooday aqoonyahan Michael Rubin in deeqaha la siiyo Soomaaliya ay sii hurinayso colaada iyo kooxaha xagjirka ah ee ku beermay dalkaas oo lagu qiimeeyey waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka.